ထောက်ခံစာများ - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO ။ , LTD
ငါ ouzhan ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအရမ်းကျေနပ်တယ်။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်လျင်မြန်ပြီး Gaby သည်ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါ Ouzhan နှင့်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
လျင်မြန်စွာလှည့်နှင့် spec မှလုပ်သောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်။ ငါထက်ပိုတောင်းလို့မရဘူး။
အစိတ်အပိုင်းများကို 3D မော်ဒယ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုအမိန့်ကိုဆွေးနွေးစဉ်အင်ဂျင်နီယာများသည်ကျွန်ုပ်၏အမှားများကိုရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်အင်ဂျင်နီယာများသည်အလွန်ဂရုပြုကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော အဆိုပါတင်ပို့ခြေရာခံခဲ့သည် အပိုင်းတစ်ခုစီသည် multi-layer ဖြင့်မြှုပ်ထားသောရုပ်ရှင်ထဲတွင်အခြားသူများမှသီးခြားစီထုပ်ပိုးထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်ပါတယ် မန်နေဂျာ Chandler သည်အဆက်အသွယ်ရှိနေပြီးထိုနေ့တွင်ပင်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လုပ်သွားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဒီ CNC ဆိုင်ကျောက်တုံး! ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်၏အမှာစာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်အားကူညီသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ရှိ၍ ၎င်းသည်အရာရာတိုင်းကိုအလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ အမှာစာများမြန်ဆန်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သည်ကြီးရီယိုကိုတောင်း!
လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များ၊ အသေးစိတ်များနှင့်နမူနာများအားလုံးကိုဆွေးနွေးခြင်းသည်အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်မြန်ဆန်စွာဆက်သွယ်မှုနှင့်အရည်အသွေးနှင့်ပြီးမြောက်မှု၏ပန်းချီကားများကိုအတိအကျထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Ouzhan နှင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစုရှယ်ယာများမှထုတ်ကုန်များစွာနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောအနာဂတ်တွင်လုပ်ကိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။